Ciyaartoyda Ingiriiska oo durba bilaabay u diyaar garowga usoo bixitaanka wareega 16 ka Euro 2016ka. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ciyaartoyda Ingiriiska oo durba bilaabay u diyaar garowga usoo bixitaanka wareega 16 ka Euro 2016ka.
Ciyaartoyda Ingiriiska oo durba bilaabay u diyaar garowga usoo bixitaanka wareega 16 ka Euro 2016ka.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 11:13 AM Cayaaryahanada Xulka qaranka England iyo Macalinkooda ayaa ka soo Dukaameystey suuqyada dalka France halkaa oo ay ka soo iibadeen xitaa shambaaydii ay ku dabaal dagi lahaayeen.
Cayaartoyda England ayaa doonaya in ay u dabaal dagaan u soo bixitaanka Wareega 16 ka ee koobka yurub 2016 ka Waxayna Xaqiijin doonaan soo bixi taankooda hadii ay bareejo lagalaan dalka Slovakia.
Wixii kadanbeeyey guushii ay ka Gaareen dalka Wales Waxaa Xulka dalka England aad loogu amaanayey Guushaas waxaana Xidigaha dalkaas ay farxad ku joogeen dalka France balse lama qiyaasi karayo waxaa ku xigi doona ee ay Samayn doonaan.